Myanmar Journalism Institute | Page 2
Myanmar Journalism Institute
Download Member Form
August 17, 2016 အဖွင့်စာမျက်နှာJunior Joseph
မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံ မှ ယခုအချိန်တွင် အချိန်ပိုင်းဒီပလိုမာ သင်တန်း နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သတင်းပေးပို့ခြင်း ဆရာဖြစ် (TOT) သင်တန်း များ ၏ လျှောက်လွှာများအား သတ်မှတ်ရက် ကျော်လွန်သွားပြီ ဖြစ်သောကြောင့် လက်ခံတော့မည် မဟုတ်ကြောင်း အသိပေးကြေငြာအပ်ပါသည်။
အချိန်ပြည့်ဒီပလိုမာ သင်တန်းလျှောက်လွှာများကို သတ်မှတ်ရက်ဖြစ်သည့် သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့ ည ၁၂ နာရီအထိ ဆက်လက်လက်ခံပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေငြာအပ်ပါသည်။
August 3, 2016 အဖွင့်စာမျက်နှာJunior Joseph
ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြုလုပ်မည့် ဆရာဖြစ်သင်တန်း အတွက် လျှောက်လွှာ ခေါ်ယူခြင်း
သင်တန်းကာလ ။ ။၂၀၁၆၊ စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့မှ ၁၀ ရက်နေ့အထိ။
အချိန်။ ။ ။နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအထိ နေ့စဉ်
နေရာ။ ။ ။မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံရုံး၊ အမှတ် ၁၁ M၊ မဟာမြိုင်လမ်း၊ ကျွန်းတောအလယ်
အကြောင်းအရာ။ ။သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သတင်းရေးသားနည်း ဆရာဖြစ်သင်တန်း။
မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံ Myanmar Journalism Institute (MJI) သည် မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ အမှီအခိုင်ကင်း ၍လွတ်လပ်သော ပုဂ္ဂလိက သင်တန်းကျောင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်းပညာရပ် နယ်ပယ်တွင် အမှီအခိုကင်းသော အရည်မြင့်မားသောမီဒီယာများ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးထွန်းကားလာရေး နှင့် သတင်းစားဆရာများအား နိုင်ငံတကာ အမြင့်ဆုံးစံချိန်မှီ သက်မွေးပညာရပ်တစ်ခု အဖြစ် မွမ်းမံသင်တန်းပေးရန် နှင့် မွေးထုတ်ပေးရန် တည်ထောင်ခြင်းဖြစ်သည်။MJI ကို ကို ၂၀၁၄ ဇူလိုင်လမှ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုကို အဓိကထားသော သတင်းပညာသင်တန်းများကို ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ မှ ဆရာများဖြင့် ပို့ချလျက်ရှိသည်။
ယခုအခါ မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့တစ်ခု ဖြစ်သော WWF Myanmar နှင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံအခြေဆိုက် Canal France International(CFI) တို့နှင့် ပူးပေါင်းကာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာသတင်းရေးသားနည်း သင်တန်းကို ဖွင့်လှစ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ သင်တန်းကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံသင်တန်းခန်းမ တွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့မှ ၁၀ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းပြုလုပ်ရခြင်း ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ နှင့် သတင်းထောက်များအကြား ဆက်ဆံရေး ပေါင်းကူးတံတားများ တည်ဆောက်ပေးခြင်းအား ဖြင့်သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ရေးဆွဲရာမှာအထောက်အကူဖြစ်နိုင်မည့် အပြန်အလှန်အကြံပြု ချက်တွေ ကို ဖြစ်ပေါ်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဖြစ်သင်တန်းအတွင်းမှာ မျှော်လင့်ထားတဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ ကတော့
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် သင်ကြားမှုနည်းစနစ်များအား သင်ကြားပေးခြင်း
အပြန်အလှန်ဆက်ဆံခြင်း နှင့် သင်ကြားမှုအရည်အသွေးများကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း
သင်တန်းဆရာများအား မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုတိုးမြှင့်လာစေရန် သင်ကြားပေးခြင်း
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နှင့် ပက်သက်သော နောက်ခံအကြောင်းအရာများ တည်ဆောက်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းတွင် အောက်ပါ အတိုင်း အစိတ်အပိုင်း ၃ ခုပါဝင်မည်။
၁။ ပင်မသင်တန်း – ၂၀၁၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့ မှ ၁၀ ရက်နေ့ အထိ မြန်မာသတင်း ပညာသိပ္ပံရုံးတွင် ပြုလုပ်ပါမည်။
၂။စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် Media Awareness Day ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပြီး အဆိုပါနေ့တွင် သင်တန်းသားများ နှင့် ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ မှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ ထိတွေ့နှီးနှောဖလှယ်ခွင့်ရမည် ဖြစ်သည်။
၃။သင်ရိုးညွှန်းတမ်းရေးဆွဲနည်း သင်တန်းအတွက် အောက်ပါခေါင်းစဉ်များအနက်မှ မိမိနှစ်သက်ရာ တစ်ခုကို ရွေးချယ် တက်ရောက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
(၁) Corporate Sustainability (Sep 21 – 23)
(၂) Energy (Sep 26 – 28)
(၃) Bio Diversity (Sep 29 – Oct 1)
Print, Online, Tv, Radio စသည့်မီဒီယာတစ်ခုခုတွင် အင်္ဂလိပ် (သို့) မြန်မာဘာသာဖြင့် သတင်းရေးသားခြင်းအတွေ့အကြုံ ရှိသည့် သတင်းထောက်များ
မိမိတတ်မြောက်ထားသည်များကို အခြားသူများအား ပြန်လည်မျှဝေချင်စိတ်ရှိသူများ၊ သင်တန်းဆရာ ဖြစ်လိုသော ဆန္ဒရှိသူများ
သင်တန်းတက်ရောက်ရန် နှင့် သင်တန်းပြန်လည် ပို့ချနိုင်ရန်အတွက် အချိန်ပေးနိုင်သူများ
သင်တန်းလျှောက်လွှာများအားလုံးကို စိစစ်ရေးအဖွဲ့မှ စိစစ်ရွေးချယ်သွားမည် ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၉ ရက် နှင့် ၂၀ ရက်နေ့များတွင် လူတွေ့အင်တာဗျူးခေါ်ယူသွားမည် ဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်ခံရသည့် လျှောက်ထားသူများကို သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်အကြောင်းကြားပေးမည် ဖြစ်သည်။
လျှောက်လွှာဖောင်များ Download ရယူရန်
စိတ်ပါဝင်စားသူများ အင်္ဂလ်ိပ်ဘာသာဖြင့် ဖြစ်စေ၊ မြန်မာဘာသာဖြင့်ဖြစ်စေ လျှောက်လွှာဖြည့်သွင်းပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် ညသန်းခေါင်မတိုင်မီ လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ အွန်လိုင်းမှ လျှောက်ထားရာတွင် အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက ဦးစိုးဇော်မော်၊ ပြန်ကြားရေးအရာရှိ၊ မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံ၊ ဖုန်း ၀၉ ၇၈၆ ၂၃၂ ၄၀၀ သို့လည်းကောင်း communications@mjimyanmar.org သို့လည်းကောင်း ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
MJI Full-time Diploma 2015-2016 သင်တန်းသားများ ဖန်တီးခဲ့သည့် သတင်းများ(ရေဒီယို နှင့် တီဗီ)
July 29, 2016 အဖွင့်စာမျက်နှာRicky Soe
ပျဉ်းမနားဘူတာ ရေဒီယိုသတင်း (ဖန်တီးသူများ – ဇေယျာမော်၊ အယ်လ်ထုမိုင်၊ တင်ဇော်ထွန်း၊ တွမ်ပိ၊ စိုးသူရ)
မြေယာသိမ်းဆည်းမှု ရေဒီယိုသတင်း (ဖန်တီးသူများ – ဇေယျာမော်၊ အယ်လ်ထုမိုင်၊ တင်ဇော်ထွန်း၊ တွမ်ပိ၊ စိုးသူရ)
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ တီဗီသတင်း (ဖန်တီးသူများ – ဝင်းကျော်ကျော်၊ စိုးသူအောင်၊ ကျော်ကိုကို)
မြေယူသိမ်းဆည်းမှု တီဗီသတင်း (ဖန်တီးသူများ – သူဇာလင်း၊ ကောင်းထက်စံ၊ စောမာဂေထူး)
MJI Full-time Diploma(2015-2016) သင်တန်းသားများဖန်တီးခဲ့သည့် MJI မဂ္ဂဇင်း (မြန်မာ) ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်၍ ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (ကေဇွန်နွေး၊ ခင်မေစန်း၊ စောချစ်အေး၊ စောမောင်အောင်၊ ထက်ထက်၊ နေမျိုး၊ မျိုးပြည့်သင်း၊ ရွှေပေါ်မြတင်)
To download and read the MJI Magazine created by MJI Full-time DIploma (2015-2016) Student. Click here. (Kay Zon Nway, Khin May San, Saw Chit Aye, Saw Maung Aung, Htet Htet, Nay Myo, Myo Pyae Thin, Shwe Paw Mya Tin)
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသတင်းရေးသားနည်း သင်တန်းမှ သင်တန်းသားများ ဖန်တီးခဲ့သည့် သတင်းများ
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသတင်းရေးသားနည်း သင်တန်းမှ သင်တန်းသားများ ဖန်တီးခဲ့သည့် သတင်းများ ကိုဖတ်ရန် ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်၍ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။
အချိန်ပြည့် ဒီပလိုမာ သင်တန်းအတွက် လျှောက်လွှာဖောင်များ လက်ခံနေပါပြီ ။
July 22, 2016 အဖွင့်စာမျက်နှာRicky Soe
မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံ အချိန်ပြည့်သတင်းစာပညာ ဒီပလိုမာသင်တန်းသားခေါ်ယူခြင်း
စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း စတင်မည့် မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံ၏ ဒုတိယအသုတ် အချိန်ပြည့်သတင်းစာပညာသင်တန်း (Full-time diploma course) အတွက် သင်တန်းတက်ရောက်နိုင်ရန် လျှောက်လွှာများ စတင်လက်ခံနေပါပြီ။
အချိန်ပြည့်သတင်းစာပညာ ဒီပလိုမာဆိုတာ …..
သတင်းလောကကို ၀င်ရောက်လိုတဲ့ လူငယ်များအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ လက်တွေ့ကို ဦးစားပေးသော မာလ်တီမီဒီယာ (ပုံနှိပ်၊ရေဒီယို၊ဓာတ်ပုံ၊တီဗီ နှင့် အွန်လိုင်း) သတင်းစာပညာသင်တန်းဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းကာလ ကြာမြင့်ချိန်ကတော့ ၁၀ လ ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ သင်တန်းဆရာများက ပို့ချသွားမှာဖြစ်သည်။ မြန်မာဘာသာဖြင့် သင်ကြားပို့ချမှာဖြစ်သည်။ MJI မှပေးအပ်သော ဒီပလိုမာကို UNESCO က အသိအမှတ်ပြုထားသည်။
၈။ဗီဒီယိုကင်မရာ၊ အသံဖမ်းစက်၊ ကင်မရာ စသည်တို့ ကိုင်တွယ်အသုံးပြုနည်းများ
၉။ သတင်းတိုက်များတွင် အလုပ်သင်အဖြစ် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်း
၁၀။ ရက်ရှည် ခရီးထွက် သတင်းလိုက်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ စိတ်အားထက်သန်စွာ တက်ရောက်လိုသူ သင်တန်းသား ၂၀ ဦးကို ရွေးချယ်လက်ခံသွားမည် ဖြစ်သည်။
သင်တန်းနေရာ၊ သင်တန်းချိန် နှင့် သင်တန်းကြေး
သင်တန်းတက်ရောက်ရမည့်နေရာမှာ မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံသင်တန်းကျောင်း- အမှတ် ၁၁ M၊ မဟာမြိုင်လမ်း၊ ကျွန်းတောအလယ်ရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ဖြစ်သည်။
သင်တန်းအချိန်မှာ အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်များမှလွဲ၍ နေ့စဉ် နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၄ နာရီအထိ ဖြစ်ပြီး လက်တွေ့ကွင်းဆင်းခြင်းများလည်း ပါဝင်သည်။ သတင်းဌာနများတွင် အလုပ်သင်အဖြစ်သင်ယူခြင်း (Internship Program) ပါဝင်သည်။
သင်တန်းကြေးမှာ သိန်း ၂၀ ကျပ် ဖြစ်ပြီး သတင်းစာပညာ ဒီပလိုမာသင်တန်းကို တက်ရောက်လိုသော်လည်း ငွေကြေးအခက်အခဲရှိသူများအနေဖြင့် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးအစီအစဉ် ၂ ခုရှိပါသည်။ သင်တန်းကြေးနှင့် နေထိုင်စားသောက်စရိတ်များဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့မှုဖြစ်သည်။
ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး အစီအစဉ် (၁)- သင်တန်းကြေးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ကင်းလွတ်ခွင့်
ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးမှာ သင်တန်းကြေး၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေကိုသာထောက်ပံ့သော အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ သင်တန်းသားတိုင်း သင်တန်းကြေး၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သော ၅ သိန်းကျပ်ကို မဖြစ်မနေ ပေးသွင်းရမည်။ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးရရှိမှုအပေါ် မူတည်ပြီး ကျန်ပမာဏကို အရစ်ကျပေးသွင်းနိုင်သည်။
သင်တန်းကြေးသက်သာခွင့် လျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာတွင် အချက်အလက်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး အစီအစဉ် (၂) နေထိုင်စားသောက်စရိတ်ကင်းလွတ်ခွင့်
နယ်မှ လာရောက်သော ကျောင်းသားများအတွက် သီးခြားအစီအစဉ်ဖြစ်ပြီး နေထိုင်ရန် အဆောင် နှင့် စားသောက်စရိတ်တို့ကို ထောက်ပံ့ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ် နယ်မှလာရောက်သူ ဖြစ်ရမည် ဖြစ်ပြီး မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံ မှ သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းများကို မပျက်မကွက် လိုက်နာရမည် ဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာတွင် အချက်အလက်များကို ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အနိမ့်ဆုံး အထက်တန်းအောင်ပြီးသူများ လျှောက်ထားခွင့်ရှိသည်။ သင်တန်းတက်ရောက်လိုသူများသည် လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ပါခေါင်းစဉ်များမှ မိမိနှစ်သက်ရာတစ်ခုကို ရွေးချယ်ကာ ဆောင်းပါး (သို့) အက်ဆေးတစ်ပုဒ် ရေးသားပေးပို့ရမည် ဖြစ်သည်။ (စာလုံးရေ ၅၀၀ ထက်မနည်းဖြစ်ကာ စာလုံးရေ ၁၅၀၀ ထက်မပိုစေရပါ။)
သင်တန်းလျှောက်ထားရန် လျှောက်လွှာများကို ဤနေရာတွင် ကလစ်နှိပ်ပါ။
သင်တန်းကြေး တစိတ်တပိုင်း ကင်းလွတ်ခွင့် လျှောက်လွှာများကို ဤနေရာတွင် ကလစ်နှိပ်ပါ။
၁။ လူမှုကွန်ရက်(Social Media) ကို အစိုးရအနေဖြင့် ထိန်းချုပ်သင့်သလား။
၂။ဒီမိုကရေစီ တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာ Media ၏ အခန်းကဏ္ဍ မည်သို့ရှိသင့်မည် ထင်သလဲ။
၃။ကွမ်းစားတာကို အစိုးရအနေဖြင့် ထိန်းချုပ်သင့်သလား။ သင်၏ အမြင်ကို ဆွေးနွေးတင်ပြပါ။
မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံကျောင်း၏ Communication Officer ဦးစိုးဇော်မော် communications@mjimyanmar.org သို့ သြဂုတ်လ (၂၃) ရက်၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတိုင်မီ ပေးပို့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ရုံးခန်းနေရာအသစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေငြာခြင်း
June 13, 2016 အဖွင့်စာမျက်နှာJunior Joseph
မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံ (Myanmar Journalism Institute- MJI) ရုံးကို အမှတ် ၁၁ (M)၊ မဟာမြိုင်လမ်းသွယ်၊ မဟာမြိုင်လမ်း၊ ကျွန်းတော် အလယ်ရပ်ကွက်၊စမ်းချောင်းမြို့နယ် သို့ ယခုလ လလယ်မှာ ပြောင်းရွှေ့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း (အထက်ဘလောက်)မှာရှိတဲ့ သင်တန်းခန်းမ နှင့် ပုဂံအိမ်ရာ ရှိ အုပ်ချုပ်ရေးရုံးအား ပိတ်ပြီး ၃ ထပ်အဆောက်အဦး ရုံးသစ်မှာ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရုံးသစ်ပြောင်းရွှေ့မှုကို ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့မှာ လုပ်မှာဖြစ်ပြီး ရက်အနည်းငယ်အတွင်း အခင်းအကျင်းအထိုင်ချမှုများ ပြီးစီးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမှတ် ၁၁ (M)၊ မဟာမြိုင်လမ်းသွယ်၊ မဟာမြိုင်လမ်း၊ ကျွန်းတော် အလယ်ရပ်ကွက်၊စမ်းချောင်းမြို့နယ်။
We are moving! Beginning June 15, Myanmar Journalism Institute will be located in the 11M, Mahar Myaing lane, Maha Myaing street, Kyun Taw Quarter, Sanchaung Township. With more than double the space of our old training hall and administrative office we will be able to carryalarger activities of the institution. Visit afterafew days of moving and take advantage of meeting trainers and trainees.
သင် အလုပ်လုပ်ရင်း ပညာဆည်းပူးလိုပါသလား
June 9, 2016 အဖွင့်စာမျက်နှာJunior Joseph
မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံ မှ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေသော သတင်းထောက်များအတွက် အချိန်ပိုင်းဒီပလိုမာ သင်တန်းကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ဖွင့်လှစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်းကာလမှာ ၁၂ လ ကြာမြင့်မှာ ဖြစ်ပြီး အခြေခံသတင်းစာပညာအပြင် Multi-Media သတင်းထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်အောင် သင်ကြားပေးမည့် ဒီပလိုမာ သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းကြေးမှာ ၁၂ သိန်းကျပ် ဖြစ်ပြီး သုံးကြိမ်အရစ်ကျ ပေးသွင်းနိုင်သည့်အပြင် ပညာသင်ကြေး တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိစေမည့် Scholarship အစီအစဉ် လည်း ရှိတာကြောင့် စိတ်ပါဝင်စားသူ သတင်းထောက်များ မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံ ၏ Facebook Page နှင့် Website များတွင် သွားရောက်လေ့လာပြီး လျှောက်လွှာ Form များ နှင့် Scholarship Form များအား Download ရယူနိုင်ပါသည်။ လျှောက်လွှာနောက်ဆုံးလက်ခံမည့်ရက်မှာ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၅ ရက် ဖြစ်ပြီး ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးရယူခွင့် လျှောက်လွှာနောက်ဆုံးလက်ခံမည့်ရက်မှာ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့ ဖြစ်ပါသည်။
ထပ်မံသိရှိလိုသောအချက်များအား အောက်ပါ လိပ်စာများတွင် သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
သင်တန်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာ အား Download ရယူလိုပါက ဤနေရာတွင် ကလစ်နှိပ်ပါ။
ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးလျှောက်ထားရန် လျှောက်လွှာအား Download ရယူလိုပါက ဤနေရာတွင်နှိပ်ပါ
မိမိအလုပ်ရှင် ၏ ခွင့်ပြုချက် လျှောက်လွှာအား Download ရယူလိုပါက ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
မှတ်ချက် ။ ။ အထက်ပါ လျှောက်လွှာများသည် အချက်အလက်ပြည့်စုံစွာ ထည့်သွင်းရမည့်လျှောက်လွှာများဖြစ်ပြီး အဆိုပါ လျှောက်လွှာများအပြင် မိမိကိုယ်တိုင်ရေးသားခဲ့သော Publish လုပ်ပြီး သတင်းနမူနာ အနည်းဆုံး နှစ်ခုပါရမည် ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံ (MJI) ၏ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးဆိုင်ရာ ကြေညာချက်
June 5, 2016 အဖွင့်စာမျက်နှာRicky Soe
၂၀၁၆/၂၀၁၇ပညာသင်နှစ် အချိန်ပိုင်းဒီပလိုမာသင်တန်းသားများ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံ (MJI) မှ သတင်းပညာ အချိန်ပိုင်းဒီပလိုမာသင်တန်းများအတွက် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ပေးအပ်မှုကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဝမ်းမြောက်စွာ ကြေညာအပ်ပါသည်။ ၂၀၁၆/၂၀၁၇ပညာသင်နှစ် အချိန်ပိုင်းဒီပလိုမာသင်တန်းသားများကို တက်ရောက်ရန် စိတ်ပါဝင်စားသူများအနေဖြင့် သင်တန်းကြေးနှင့် သင်တန်းနှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားကုန်ကျစရိတ်များအတွက် ထောက်ပံ့ကြေးကို လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံ (MJI) သည် နိုင်ငံတကာမှ ပုံမှန်ထောက်ပံ့လှူဒါန်းမှုများဖြင့်သာမက သင်တန်းသားများ ထည့်ဝင်ပေးချေသော သင်တန်းကြေးများကို အရင်းအနှီးပြု၍ လည်ပတ်နေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၂၀၁၆/၂၀၁၇ပညာသင်နှစ် အချိန်ပိုင်းဒီပလိုမာသင်တန်းအတွက် သင်တန်းကြေးကို မြန်မာကျပ်ငွေ ၁၂သိန်း သက်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သို့ရာတွင် MJI နှင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင်နေသော ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများ၏ စေတနာကြောင့် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ပေးအပ်မှုအပြင် ယခုနှစ်တွင်မှ ပထမဆုံးအနေဖြင့် သင်တန်းသားတစ်ဦးချင်း၏ ငွေရေးကြေးရေးအခြေအနေအပေါ် မူတည်ပြီး သင်တန်းကြေးလျှော့ပေါ့ပေးသည့် အစီအစဉ်ကိုလည်း စတင်ထည့်သွင်းလိုက်ပါသည်။
ထောက်ပံ့ကြေးလျှောက်ထားလိုသူသည် သင်တန်းတက်ရောက်ရန်လိုအပ်သည့် အရည်အချင်းများနှင့် ရှိရမည့်အပြင် ထပ်လောင်း၍ အောက်ပါအချက်များဖြင့်လည်း ကိုက်ညီရန်လိုအပ်သည်။
လွန်ခဲ့သော ၂နှစ်အတွင်း သတင်းပညာဖြင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြောင်း ခိုင်လုံသည့်မှတ်တမ်း။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ သတင်းပညာအဆင့်အတန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပြည်တွင်း သို့မဟုတ် ပြည်ပတွင် တစ်တပ်တစ်အားပါဝင်အားထုတ်ဖူးကြောင်း အသိအမှတ်ပြုထားရခြင်း။ (ထောက်ခံစာ ၂စောင်ဖြင့် ပူးတွဲတင်ပြရမည်။)
(ကျား/မတန်းတူညီမျှမှု၊ လူနည်းစုဝင်ဖြစ်မှု အချက်များကို မူတည်၍ ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်သူများက ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါမည်။)
သင်တန်းတက်ရာက်ရန်အရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်စုံသည့်အပြင် အောက်ပါအချက်အလက်များနှင့် ကိုက်ညီပါက သင်တန်းကြေးလျှော့ပေါ့ပေးရန် ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါမည်။
မိမိဘာသာပေးချေရန် တာဝန်ယူထားသည့် သင်တန်းကြေးကို ပေးချေရန်သဘောတူရမည်။ (သင်တန်းကြေးစုစုပေါင်း၏ အနည်းဆုံး တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကို မိမိဘာသာပေးချေရမည်။)
လျှော့ပေါ့ရန်တောင်းဆိုရသည့် အကြောင်းအရင်းကို ခိုင်လုံစွာပြသနိုင်ရန်အတွက် မိမိ၏ ငွေကြေးဆိုင်ရာ အနေအထားအမှန်ကို ထုတ်ဖော်ပြနိုင်ရမည်။
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ်အတွက် စုစုပေါင်းပေးအပ်မည့် ထောက်ပံ့ကြေးပမာဏသည် အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းမျာ၏ ပံ့ပိုးမှုအပေါ် မူတည်နေသည့်အတွက်ကြောင့် အရည်အချင်း ပြည့်မီသော လျှောက်ထားသူ အားလုံးကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်မှု ရှိချင်မှသာ ရှိပါလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့် MJI ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ပေးအပ်ရေး ကော်မတီအနေဖြင့် လျှောက်လွှာတစ်ခုချင်းကို စနစ်တကျစီစစ်ပြီး ဖော်ပြပါအရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံသူများကို မျှတ၍ ပွင့်လင်း မြင်သာစွာ ရွေးချယ်ပေးအပ် သွားမည် ဖြစ်သည်။
ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးအပြည့်ကို ရရှိပါက သင်တန်းကြေးအပြင် သွားလာစရိတ်၊ အစားအသောက်၊ စာအုပ်စာတမ်းများ၊ သင်ထောက်ကူ စက်ပစ္စည်များ၊ ကွင်းဆင်းသွားလာရေးစရိတ်များ စသည့် သင်တန်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် စရိတ်စကများကိုပါ ထောက်ပံ့မည့်ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်မြို့ ပြင်ပမှ/ပြင်ပသို့ ခရီးသွားလာသည့် စရိတ်များ၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် နေထိုင်စရိတ်၊ နေ့စဉ်အသုံးစရိတ်နှင့် သင်တန်းတက်နေသည့်အချိန်အတွင်း အလုပ်မလုပ်နိုင်သောကြောင့် နစ်နာသွားသော ဝင်ငွေများအတွက် အလျော်ပေးခြင်းများ MJI ၏ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးတွင် ပါဝင်မည်မဟုတ်ပါ။
အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကို တင်သွင်းရမည်။
အချိန်ပိုင်း ဒီပလိုမာသင်တန်း လျှောက်လွှာ (လိုအပ်သော အခြားစာရွက်စာတမ်းများနှင့်တကွ)
ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်ခြင်းနှင့် သင်တန်းကြေးလျှော့ချခြင်းလျှောက်လွှာ (လိုအပ်သော အခြားစာရွက်စာတမ်းများနှင့်တကွ)
အချိန်ပိုင်း ဒီပလိုမာသင်တန်းလျှော်က်လွှာ ရယူရန် ဤနေရာတွင် ကလစ်နှိပ်ပါ။။
Employer Declaration Form(မိမိလက်ရှိလုပ်ကိုင်နေသော သတင်းတိုက်(သို့)အထက်အရာရှိ ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖောင်) ကို ရယူရန် ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးလျှောက်လွှာများ ရယူရန် ဤနေရာတွင် ကလစ်နှိပ်ပါ။
လျှောက်လွှာများကို အောက်ဖော်ပြပါ MJI ရုံးခန်းသို့ လိပ်မူပြီး ပေးပို့ရမည်။
မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံ၊ ဦးစိုးဇော်မော်၊ အခန်း ၁၀၂၊ တိုက် 2B၊ ပုဂံအိမ်ရာ၊ အနော်ရထာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ သို့မဟုတ် အီးမေးလ်ဖြင့် communications@mjimyanmar.org သို့ပေးပို့ရပါမည်။
ထပ်မံသိရှိလိုသော အကြောင်းအရာများရှိပါက communications@mjimyanmar.org သို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
လျှောက်လွှာတင်ရမည့် နောက်ဆုံးရက်မှာ ဇွန်လ ၁၆ရက်၊ ၂၀၁၆ ဖြစ်ပါသည်။
သတင်းပညာ အချိန်ပိုင်း ဒီပလိုမာ သင်တန်းသားလျှောက်လွှာများ လက်ခံချိန်ကို ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့အထိ တိုးမြှင့်လိုက်ပါပြီ
May 30, 2016 အဖွင့်စာမျက်နှာRicky Soe
သင်တန်းလျှောက်လွှာတင်ရမည့် နောက်ဆုံးရက်မှာ ဇွန်လ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဖြစ်ပြီး လျှောက်လွှာများစိစစ်ပြီး ပထမအဆင့် အင်တာဗျူးမည့်ရက်မှာ ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့မှ ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့အတွင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံ (MJI) သည် တစ်နှစ်ကြာ Part-time Diploma in Journalism သင်တန်းကို အလုပ်လုပ်နေသော သတင်းစာဆရာများအတွက် ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပါသည်။
တည်နေရာ။ ။ ရန်ကုန်
အများပြည်သူတို့ကို အင်ဖော်မေးရှင်း သတင်းအချက်အလက်များ မျှဝေလိုသော ၀ါသနာကို အရင်းခံ၍ သတင်းစာပညာဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရန် ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ အလုပ်လုပ်ရင်း သတင်းစာပညာကို နိုင်ငံတကာ စံချိန်မီ စနစ်တကျသင်ယူလိုသော ဆန္ဒများ လူငယ်လူရွယ် အများအပြားတွင် ပေါ်ပေါက်ကြဖူးပါလိမ့်မည်။ ကမ္ဘာနှင့်အ၀ှမ်း ပြောင်းလဲဖြစ်ထွန်းနေသော မီဒီယာအခင်းအကျင်း၊ နည်းပညာ၊ ဗဟုသုတများကို အမှီလိုက်နိုင်ရန်အတွက်လည်း စဉ်ဆက်မပြတ် သင်ယူလေ့လာနေဖို့လည်း လိုအပ်ပြန်သည်။
မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံက ငယ်ရွယ်သူ သတင်းစာဆရာများ အဓိကလိုအပ်သော ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် ဗဟုသုတများဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန် နေ့တစ်ပိုင်းသင်ယူနိုင်မည့် “Part-time Diploma Journalism” ဒုတိယအပတ်စဉ် သင်တန်းကို ဇွန်လ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မှစတင် ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်သည် ။ အလုပ်လုပ်ရင်း တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ပညာဖြည့်ဆည်းလိုသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းသည် မာလ်တီမီဒီယာဖြစ်၍ ပုံနှိပ်မီဒီယာသာမက ရေဒီယို၊ ဗီဒီယို၊ အွန်လိုင်းတို့ကိုပါ လုပ်ကိုင်နိုင်အောင် သင်ကြားပေးသည်။
ပြည်တွင်း ပြည်ပမှအတွေ့အကြုံရင့် ဆရာများက ပို့ချသော ဒီပလိုမာဘွဲ့ပေးအပ်မည့် သင်တန်းသည် သင်တန်းခန်းမအတွင်း သင်ယူခြင်းအပြင် e-learning (အီလက်ထရောနစ် အထောက်အကူပြုသင်ကြားရေး) အရင်းအမြစ်ကိုလည်း အသုံးပြုသလို လက်တွေ့ကွင်းဆင်းခြင်း၊ တို့လည်း ပါဝင်သဖြင့် ထူးကဲသော အခွင့်အလမ်းကောင်း ဖြစ်သည်။
မည်သည့် မီဒီယာတွင် မဆို (ပုံနှိပ်၊ ရေဒီယို၊ တီဗီ၊ အွန်လိုင်း) အနည်းဆုံး သတင်းလုပ်သက် ၂ နှစ်ရှိသူ
သက်ဆိုင်ရာ သတင်းတိုက်၏ ထောက်ခံခွင့်ပြုချက် ရမည့်သူ
သင်တန်းကြေး၊ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးနှင့် ရွေးချယ်မှု
သင်တန်းကြေးမှာ ဒီပလိုမာဘွဲ့ရ တစ်နှစ်လုံးအတွက် မြန်မာကျပ်ငွေ ၁၂ သိန်းဖြစ်ပြီး သုံးကြိမ်အရစ်ကျ ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ သင်တန်းအတွက် လျှောက်ထားသူများသည် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးရယူလိုလျှင် လျှောက်ထားခွင့်ရှိသည်။ ဒုတိယအပတ်စဉ်အတွက် သင်တန်းသား အယောက် ၂၀ ရွေးချယ်မှာဖြစ်ပြီး ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်မှုနှင့် သင်တန်းသားရွေးချယ်မှုတို့ကို သီးခြားစဉ်းစားသွားမှာဖြစ်သည်။
မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံသည် (Myanmar Journalism Institute – MJI) မူဝါဒဆိုင်ရာ အမှီအခို ကင်း၍ လွတ်လပ်သော ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၂၀၁၄ ဇူလိုင်လတွင် အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၀န်ကြီးဌာနမှ အကျိုးအမြတ်မယူသော ကုမ္ပဏီ အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရရှိခဲ့သည့် အသင်းအဖွဲ့ ဖြစ်ပါသည်။ အဖွဲ့အစည်း၏ အဓိက လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များမှာ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝှမ်း ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအနှံ့တို့တွင် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ အရည်အသွေး ပြည့်မီသော သတင်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ သင်တန်းများအား ပို့ချပေးခြင်း၊ ဒီပလိုမာသင်တန်းများ ပို့ချခြင်း၊ သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများ အချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ဘုံအကျိုးရလဒ်များ ရရှိနိုင်စေရန် ရည်သန်၍ အသင်းဝင်များဖြင့် ချိတ်ဆက် ဆောက်ရွက်နေပါသည်။ MJI ကို ဇူလိုင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်က စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုကို အဓိကထားသော သတင်းပညာသင်တန်းများကို ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ ဆရာများဖြင့် ပို့ချလျက်ရှိသည်။
မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံ (MJI) နှင့် ပက်သက်ပြီး ပိုမိုစုံလင်စွာ သိရှိလိုပါက http://www.mjimyanmar.org/ တွင် ၀င်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
သင်တန်းလျှောက်လွှာများကို ရယူရန် ဤနေရာတွင် ကလစ်နှိပ်ပါ။
သင်တန်းလျှောက်လွှာတင်ရမည့် နောက်ဆုံးရက်မှာ မေလ ၂၇ ရက်၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဖြစ်ပြီး လျှောက်လွှာများစိစစ်ပြီး ပထမအဆင့် အင်တာဗျူးမည့်ရက်မှာ ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့မှ ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့များအထိ ဖြစ်သည်။
သင်တန်းလျှောက်လွှာတင်ရမည့် နောက်ဆုံးရက်မှာ ဇွန်လ ၁၅ရက်၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဖြစ်ပြီး လျှောက်လွှာများစိစစ်ပြီး ပထမအဆင့် အင်တာဗျူးမည့်ရက်မှာ လျှောက်လွှာ့ပိန်သည့်ရက်မှ တပတ်အတွင်း ဖြစ်သည်။
သင်တန်းလျှောက်လွှာများကို info@mjimyanmar.orgသို့အီးမေးလ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင် အောက်ဖော်ပြပါ လိပ်စာ သို့မဟုတ် လူပုဂ္ဂိုလ်သို့လည်းကောင်း ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
အခန်းအမှတ် ၁၀၂ ၊ တိုက် 2B ၊ ပုဂံအိမ်ရာ၊ အနော်ရထာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့
ထပ်မံသိရှိလိုသော အကြောင်းအရာများရှိပါက ဆက်သွယ်ရေးအရာရှိ ဦးစိုးဇော်မော် communications@mjimyanmar.org ဖုန်းနံပါတ် 09254384660 သို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
အချိန်ပိုင်းသတင်းစာပညာ ဒီပလိုမာသင်တန်း ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးပေးမည်
May 22, 2016 အဖွင့်စာမျက်နှာRicky Soe
မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံ(MJI)ကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ အချိန်ပိုင်းသတင်းစာပညာဒီပလိုမာသင်တန်းကို ဇွန်လထဲမှာ စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပြီး ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးလျှောက်ထားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။
ဒီသတင်းကိုတော့ Central News Bureau က စိုးသူရကတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
MJI/UN-Habitat prize on Climate Change Reporting
အချိန်ပြည့် Multi-Media သတင်းစာပညာ သင်တန်း (တတိယအကြိမ်) ခေါ်ယူခြင်း
By-Election Reporting Training organized by MJI and supported by FHI360
Journalism Students from Japan visit MJI